“Wuxuu Ahaa Fal Masiibo Ah Oo Lasoo Abaabulay” Maamulaha Guud Ee Nuuradiin
Home WARARKA “Wuxuu Ahaa Fal Masiibo Ah Oo Lasoo Abaabulay” Maamulaha Guud Ee Nuuradiin
Hargeysa(Berberanews)-Maamulaha Guud ee Dugsiyada ugu caansan Somaliland ee Nuuradiin Scools, Mahad Ibraahim Jaamac, ayaa ka hadlay rabshado khasaare dhaliyay oo maanta ka dhacay Dugsiga Sare ee Wiilsha Hargeysa.
Rabshadaa oo siw eyn looga naxay markii lagu arkay baraha Bulshada Ardaydii wax ka baranaysay dugsiga oo bur-burinaya agabkii ay wax ku baranayeen iyo hantidii kale ee taalay.
Maamule Mahad, ayaa dhankiisa ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa mid abaabulan oo wax laga xummaado ah.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Maamulka gobolka iyo Taliyaha qaybta Booliska ee gobolka, ayaa tegay faraca dugsiyada Nuuradiin ee ay Ardaydu rabshada ka sameeyeen, kuwaasoo xaqiiqo-raadin ku sameeyey xaallada sababtay dhacdadaa.
Baraha Bulshada, ayaa lagu baahiyay Muuqaal Ardayda oo si axmaqnimo ah u bur-burinay agabkii dugsiga ay wax ku baranayeen iyo gaadiid kaamboolka dhexe yaalla.
Ardayda, ayaa si foolxun shiid iyo walxo faro qabsi ah ku garaacayey meelaha ay bartilmaameedsanayeen ee dugsiga.
Mahad waa hadloorka tacabka baddan geliyay waxbarashada Somaliland, isla markaana ah aasaasaha dugsiyada Nuuradiin oo ka mid ah dugsiyada ugu magaca weyn, isla markaana lagu majeerto Ardayda wax ka barata Akhlaaq iyo Aqoon, ayaa qaadan waa ku noqotay Bulshada wixii ay ka sameeyeen maanta dugsigooda.
Nuuradiin Schools, wuxuuna soo saaray kumaan Arday oo qaar badan oo ka mid ah ay saamayn ku leeyihiin maamulka hay’addaha dawladda iyo shirkaddaha ganacsiga.
Maamulka guud wuxuu dhacdada dugsigaas ka dhacday ku macneeyay in ay ahayd mid abaabulan oo la soo maleegay, isagoo ku sifeeyey masiibo ay sabab u noqdeen Ardaydii dugsiga wax ka baranaysay oo sida uu sheegay la soo dhex maray.
Wallaw aannay jirin cid ugu xidhiidhiyey si cad, hase yeeshee waxa uu caddeeyey in ay Hay’addaha nabad-gelyadu baadhayaan sababta iyo meesha laga soo abaabulay fadqalaaladaa..
Maamulaha Guud ee Dugsiyada ugu caansan Somaliland ee Nuuradiin Scools, Mahad Ibraahim Jaamac, ayaa Shir-jaraa’id oo markii dhacdadaasi dhacday kaddib qabtay, wuxuu ku shaaciyay in khasaare kala duwan oo culus loo geystay Xafiisyada iyo agabkii waxbarashada ee dugsiga, isagoo arrintaa ka hadlaya halkan ka daawo.
mahad ibraahin maxamed
Previous articleMuhaajiriin ku naf waayay doon ka tagtay xeebaha Djibouti
Next articleQaramada Midoobay oo sheegtay in dembiyo dagaal ka dhaceen Tigray